याद गर्नुस्, तपाईले खाने आलुमा कतै विष त छैन ?
काठमाडौं । कुनै भान्सा यस्तो होला र ? जसको भान्साघरमा आलु नहोस् । हरेकको भान्सामा आलु अनिवार्य रुपमा पाइन्छ । आलु विना त परिकार नै बन्दैन भन्ने पनि लाग्छ ।
आलु जुनसुकै तरकारीमा पनि मिल्छ । जुन तरकारीमा पनि मिसाएर पकाउन सकिन्छ । आलु, अन्य सागसव्जी, तरकारीमा मिसाएर मात्र नभइ तरकारी बनाएर उसीनेर तारेर आदी विभिन्न तरिकारले पकाउन सकिन्छ । अझ नेपाल र भारत लगायतको देशमा त यसको उत्पादन तथा उपभोग बढी हुने गरेको छ ।
विश्वभर नै आलुको बढी प्रयोग हुने गरेको छ । आलूलाई भण्डारण गरेर राख्ने गरिएको छ र यसलाई आवश्यकता अनुसार प्रयोग गर्ने गरिएको छ । तर यसरी भण्डारण गरिएको आलु प्रयोगले त्यति फाइदा भने दिँदैन । यस्ता केही आलु छन् जसलाई प्रयोग गर्दा त्यसले नकारात्मक असर पर्छ ।